Vanim-potoana vaovao ho an'i Korea ho toerana fialamboly kilasy teny
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Vanim-potoana vaovao ho an'i Korea ho toerana fialamboly kilasy teny
GONGZI Jeju CASINO dia namoaka an'izao tontolo izao 16 Jolay, 2017, nanambara vanim-potoana vaovao ho an'i Korea ho toerana fialamboly kilasy teny. GONGZI Jeju dia maneho fisondrotana ara-toekarena lehibe ho an'ny indostrian'ny lalao ao Jeju, izay ho lasa sary famantarana any Korea ary hametraka fatra vaovao ho an'ny traikefa filokana avo lenta.
Lysa Evans, Ny Lehiben'ny mpiasan'ny GONGZI Jeju dia nilaza izany "Nentinay tany Jeju ny teknolojia filalaovana farany sy ny fahamendrehan'ny lalao Macau, Singapore sy toeran-kilalao kilasy an'izao tontolo izao hafa. Ny vinan'ny tomponay GONGZI dia ny hamorona traikefa amin'ny lalao amin'ny toerana azo aleha, miaraka amin'ny toerana voajanahary mahafinaritra sy fialamboly mampiala voly." Ho fahatsiarovana ity hetsika ity, vahiny an-jatony maro no nasaina hanatrika ny fankalazana fanokafana, miaraka amin'ny dihy liona nentim-paharazana, fampisehoana tamin'ny laser, fampisehoana kintan'ny pop ary nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo gala, izay namorona tontolo feno fahafinaretana sy mahafinaritra.
Mijoro amin'ny toerana kanto sy mahafinaritra i GONGZI Jeju, tsy mitovy amin'ny karazany ao aminy. Ilay faritra filalaovana fanitarana tongotra 40,000 45 toradroa vaovao dia mirehareha amin'ny safidy fialamboly isan-karazany, ao anatin'izany ny latabatra filalaovana 2 sy ny milina slot roapolo. Faly ireo vahiny nitsidika ny efitrano mahafinaritra mba hahitana traikefa filokana mahatalanjona, hankafy ny lovia avo lenta eran'izao tontolo izao ary hankafy ny fomba fijery kanto.
GONGZI Group dia manaparitaka ny orinasany ao Macao and over Asia miaraka amin'ny filozofia fitadiavana traikefa kilalao premium amin'ny alàlan'ny fanomezana tombony manokana an'ireo mpitsidika erak'izao tontolo izao. Jeju koa dia nantsoina hoe 'Hawaii an'i Korea 'toy ny tontolo mahafinaritra sy toetrandro mahafinaritra. Ary i GONGZI Jeju dia manome toky ihany koa fa ny mpandeha dia hankafy làlana tsy hay hadinoina amin'ny alàlan'ny fanolorana tolotra avo lenta eto.
Mba hanitarana ny tsenan'ny fialam-boly sy fandraharahana any Jeju miaraka amin'ny toeran-kafa, Air Macao dia nanangana sidina mivantana avy any Macao ho an'i Jeju. Amin'ny dia 10 minitra fotsiny eo anelanelan'ny GONGZI Jeju sy ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Jeju, ity fitaterana ity dia hanome safidy vaovao ho an'ny mpizahatany iraisam-pirenena handaminana ny dia.